Maxay dad badani uga doorbidaan weelka aluminiumka aluminiumka kan caagagga ah?
Aluminiumka aluminiumku wuxuu ka samaysan yahay aaladda aluminium ee waddanka ka dib markii dhowr geeddi-socod oo duubis ah, lafteeda iyada oo aan lahayn biro culus iyo walxaha kale ee waxyeellada leh. Soo-saaridda aluminium-aluminium, adeegsiga hannaanka jeermiska ee qaboojiyaha ee heerkulka sarreeya, si markaa aluminiumku uu ugu badbaado la xiriir ...
Muxuu yahay muuqaalka alaabada aluminium ee allwinpack?
1.All noocyada faahfaahinta, waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Cabirka iyo qoto-dheerka ayaa la dooran karaa-inay buuxiyaan shuruudaha kala duwan. 2. Weelka foornada weelka foornada ee ay ansaxisay FDA iyo KOSHER. Amniga iyo caafimaadka, iyada oo loo marayo nadiifinta heerkulka sare. Sida ay tahay in loola xiriiro ...
Weelalka aluminium ee aluminium miyaa lagu kululeyn karaa microwave-ka?